COVID-19 – Page9– Healthy Life Journal
ပြန်ကောင်းလာသည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လူနာတို့၏ သွေးရည်ကြည်ဖြင့် အခြားပိုးရှိသူများထံ သွေးသွင်းကုသနေ
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရပြီး ပြန်ကောင်းလာသူတွေရဲ့သွေး (သွေးရည်ကြည် Plasma) ကို လိုအပ်တဲ့လူနာတွေထံ သွင်းပေးတဲ့ ကုသနည်းကို စမ်းသပ်နေပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရပြီး ပြန်ကောင်းလာသူရဲ့သွေးထဲမှာ အင်တီဘော်ဒီခေါ် ခုခံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ဓာတ်ပါရှိတာကြောင့် ကယ်လ်လီဖိုးနီးယားမှာ ရောဂါပြင်းထန်တဲ့ လူနာတွေမှာ စတင်သွင်းပေးနေတယ်လို့...
COVID-19 လူနာများအတွက် ဆေးရုံအဖြစ် ပြင်ဆင်နေသည့် ဖောင်ကြီးဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်တွင် မကြာမီ ကုသမှုပေးနိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ဖောင်ကြီးဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်ကို COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့လူနာများထားရှိရန် ကုတင် ၂၀ဝ မှ ၂၀ဝဝ ဆံ့ ဆေးရုံအထိ အမြန်ဆုံး ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲလျက်ရှိပြီး ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုများကို Training ပေးခြင်း၊ ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းနှင့် အခြားလိုအပ်သော...
COVID-19 ကာကွယ်ရေးအတွက် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ၃ပေအကွာအဝေးမှာ နေရမလား၊ ၆ပေအကွာအဝေးမှာ နေရမှာလား . .
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ Q. COVID-19 ကာကွယ်ရေးအတွက် အပြင်မှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘယ်နှပေအကွာအဝေးမှာ နေရမလဲ ဆရာ။ ၃ပေလား၊ ၆ပေလား။ A. ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ၃ ပေအကွာအဝေးမှာ နေရမယ်လို့ ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ USကတော့...
COVID-19ဗိုင်းရပ်စ်က ဘယ်နေရာတွေမှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာရှင်နိုင်သလဲ
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ Q. COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်က ဘယ်နေရာတွေမှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ နေနိုင်ပါသလဲ ဆရာ။ A. COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်က- – လေထဲမှာဆိုရင် အပူချိန် ၅၀-၅၉ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ ၄ နာရီကြာ၊ ၇၇...
COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ အရွယ်အစားက ကြီးတယ်ဆိုတာ မှန်ပါသလား
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ Q. COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ အရွယ်အစားက ကြီးတယ်ဆိုတာ မှန်ပါသလား ဆရာ။ A. COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်က အရွယ်ကြီးတယ်ဆိုတာ မှားပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်က125 nanometer ပဲရှိပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပါဝင်တဲ့ အမှုန်အမွှား (droplet)...
ဆေးခန်းပြတဲ့အခါ ကိုယ့်ရောဂါရာဇဝင်အကြောင်းပြောရင် ဘာကောင်းကျိုးတွေ ရှိသလဲ . .
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ Q. ဆေးခန်းပြတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှာစိုးလို့ ကိုယ့်ရောဂါရာဇဝင်၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၄ ရက်အတွင်း နိုင်ငံခြားသွားထားဖူးသလား စတာတွေကို အမှန်အတိုင်းပြောရင် ဘာကောင်းကျိုးတွေ ရှိပါသလဲ ဆရာ။ A. ဆရာဝန်ကို ကိုယ့် History ပြောခြင်းအားဖြင့်...
COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် အသွားအလာ ကန့်သတ်ခြင်း ပြုလုပ်သည့်နေရာများတွင် အရေးတကြီးလိုအပ်သော တကိုယ်ရေအသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများကို ကုလသမဂ္ဂမှ ပံ့ပိုးမည်
အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်း(Quarantine) ပြုလုပ်သည့်နေရာများတွင် အရေးတကြီးလိုအပ်သော တကိုယ်ရေအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၊ အိပ်ယာခင်း၊ မွေ့ရာ၊ စောင်၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ၊ ခြင်ထောင်များ အစရှိသည့် အခြေခံအသုံးအဆောင် ၅၀ဝဝ ကျော်ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနသို့ ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် (WFP) ကလည်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ...
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) ကာကွယ်ရေးအတွက် ဘယ်လိုနေထိုင်စားသောက်ရမလဲ . . .
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ Q. ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) ကာကွယ်ရေးအတွက် ဘယ်လိုနေထိုင် စားသောက်သင့်ပါသလဲ။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ဆိုတော့ သိပ်စိုးရိမ်မိပါတယ်။ Hnin(FB) A. COVID-19 က မဖြစ်ဖို့ရာ ကာကွယ်ဖို့ အထူးအရေးကြီးပါတယ်။ တကယ်လို့များ ကူးစက်ခဲ့ရင်...
COVID-19 ရောဂါက အေသွေးပိုင်ရှင်တွေမှာ ပိုအဖြစ်များတယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်၍ . . .
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ Q. အခုသတင်းတွေအရ COVID-19 ရောဂါက အိုသွေးပိုင်ရှင်တွေထက် အေသွေးပိုင်ရှင်တွေမှာ ပိုအဖြစ်များတယ်ဆိုပြီး ပြောနေကြလို့ပါ။ အဲဒါက ဖြစ်နိုင်ပါသလား ဆရာ။ နောက်တစ်ချက်က ရောဂါဖြစ်နှုန်းတွေက သွေးအုပ်စုနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိပါသလား။ (စာဖတ်သူတစ်ဦး) A. ဆရာ့ထင်မြင်ချက်အရ...